Ihe kpatara I Ji Kwesiri itinye ego na vidiyo vidiyo na Saịtị Ecommerce gị | Martech Zone
Vidiyo ngwaahịa na-enye ndị na-ere ahịa e-ụzọ dị iche iche nke igosipụta ngwaahịa ha ma na-enyekwa ndị ahịa ohere ịlele ngwaahịa na ọrụ. Site na 2021, a na-eme atụmatụ na 82% nke ịntanetị niile ga-abụ nke oriri vidiyo. Otu ụzọ azụmahịa eCommerce nwere ike isi nweta nke a bụ site na ịmepụta vidiyo vidiyo.
Statistics na-agba ume ngwaahịa vidiyo maka saịtị Ecommerce gị:
88% nke ndị nwe ụlọ ọrụ kwuru na vidiyo vidiyo na-abawanye ọnụego ntụgharị
Vidio vidio mepụtara 69% na nha nha
A na-etinye oge 81% na saịtị ebe vidiyo na-ekiri
Vidiyo vidiyo mepụtara 127% mmụba na nleta peeji nke nwere ha
Ihe omuma a, Ihe mere ị ga - eji tinye ego na vidiyo vidiyo taa, na-akọwapụta uru nke vidiyo vidiyo maka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ma na-enye ndụmọdụ iri kachasị elu ga-eduzi gị na usoro ịme vidiyo vidiyo:
Mee atụmatụ gị maka ịmepụta, ịkwalite, na ịlele mmetụta nke vidiyo vidiyo gị.
Malite nke nta site na ịmepụta vidiyo nke vidio gị ngwaahịa kacha ere.
Debe vidiyo gị mfe iji mee ka ndị na-ege ntị dịgasị iche dịgasị iche.
Debe vidiyo gị obere na ruo n'ókè.
Na-ebuli peeji gị ka vidiyo ahụ wee kpọọ ngwaọrụ mkpanaka.
Gosi na eji ya eme ihe iji nye echiche dị mma nke mmetụ na mmetụta nke ihe ahụ.
Kwalite vidiyo gị maka ibipụta akwụkwọ na mba ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ.
Gụnye a kpọọ ka eme gbaa ndị na-ekiri ha ume ịzụ.
Jiri vidiyo nkọwa ma ọ bụ ndepụta okwu maka ikiri mgbe ụda na-akwụsị.
Gbaa ume ihe njirimara nke onye ọrụ site n'aka ndị ahịa n'ezie ndị zụrụ ngwaahịa ahụ.
Jide n'aka na ị gụọ isiokwu ndị ọzọ na infographic na ụdị vidiyo vidiyo ị nwere ike ịmepụta. Lee infographic zuru ezu:
Tags: vidiyo vidiyo kacha ere ahịakpọọ ka emevidiyo ngwaahịa ecommercevidiyo ecommerceinfographicngwaahịa vidiyo vidiyootu ihengwaahịa vidiyo ogologoatụmatụ vidiyo ngwaahịavidiyo vidiyomgbasa ozi ngwaahịa na-elekọta mmadụugc vidiyoonye ọrụ mepụtara ọdịnayaEderede Vidiovideo ndepụta okwuvideos
Ringkekọrịta ezughi oke - Ihe kpatara I Ji Chọta Usoro Mgbasawanye Ọdịnaya